Wasaaradda Maaliyadda oo loo jeediyey iney la timaado qorshe lagu daabacayo lacag cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 15 February 2015
Mareeg.com: Guddiga Maaliyadda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Wasaaradda Maaliyadda weydiistay in ay wax ka qabato qiima dhaca ku yimid lacagta Shilin Soomaaliga ayna soo daabacdo Lacag Cusub.
Baaqaan ayaa yimid xilli dadka Soomaaliyeed dhibaato xoog leh ku qabaan lacagta kunka Shilin Soomaaliya oo aad usii duugabaya, islamarkaana laga yaabo iney bilaha soo socda la adeegsan waayo.
Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir oo ah Guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ayaa mar uu ka hadlayay munaasabadii uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub ee Maaliyadda, Maxamed Aadan Ibraahim (Fargeti), waxa shaaca ka qaaday in bulshada ay dhibaato ku qabto lacagaha iska bar bar shaqeynaya ee kala ah tan shilinka Soomaaliga iyo tan kale ee dhanka ah hawada ah, Wasaaradduna looga fadhiyo inay arrimahaasi wax ka qabato soona daabacaan lacago cusub oo shilin Soomaali ah, si looga baxa dhibaatadaasi.
Xildhibaanka ayaa xusay in ay sii qiimo beeleyso lacagta shillin Soomaaliga ah, isla markaana ay jiraan shirkado lacagta si hawo ah ku bixiya, taasi oo uu ku tilmaamay inay qeyb ka qaadan karto qiimo dhaca ku yimid lacagta Shilin Soomaaliga ah.
“Mushkiladda jirta hadda waxa ay tahay labo lacag oo iska garab shaqeyneyso oo mid ah tii kaashka ahayd iyo mid hawada ah oo ay sameysteen shirkado gaar ah, waajibaadka ugu culus wasaaradda iyo hay’adaha hoosyimaada ee xagga lacagta ah waxa ay tahay in la soo celiyo shilin Soomaali iyo in la sameeyo siyaasad xagga lacag ah ku saabsan” ayuu hadalkiisa ku daray Xildhibaan Samaan.
Lacagta shilin Soomaaliga ee ka kooban 1000 shilin oo kaliya ayaa sii baaba’eysa, waxaana dowladda haatan jirta meel iska dhigtay iney isku daydo qorshe lagu soo saarayo lacag cusub.
Dowladdii Sheekh Shariif ayaa bilowday qorshe lagu soo daabacayo lacag cusub oo Shilin Soomaali ah, taasoo si tijaabo ah looga bilaabay dalka Sudan, hase ahaatee dowladda Xasan Sheekh ayaa u muuqata iney kasii jeesatay.